Mohamed Salah: “Dalalka Islaamku waa inay ixtiraamaan Dumarka waxayna mudan yihiin in la siiyo xushmad ka badan inta ay haatan helaan” – Gool FM
Mohamed Salah: “Dalalka Islaamku waa inay ixtiraamaan Dumarka waxayna mudan yihiin in la siiyo xushmad ka badan inta ay haatan helaan”
(Liverpool) 18 Abriil 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Liverpool iyo xulka Masar ee Mohamed Salah ayaa ugu baaqay dalalka Islaamku inay ixtiraamaan Dumarka.
Wareysi uu Salah siiyay Wargeyska caanka ah ee ‘TIME’ ee Mareykanka ayaa waxa uu gool dhaliyaha Liverpool ku yiri: “Waxaan u baahannahay in aan beddelno qaabka aan ula dhaqanno Dumarka ee dhanka dhaqankeenna Bariga dhexe, waana in haweenka lagula dhaqmaa ixtiraam iyo xushmad”.
Salah oo ah xiddig ku dhaqma Diinta Islaamka ayaa waxaa Wargeyska ‘TIMES’ uu ku soo daray liiska 100 qof ee ugu saameynta badan caalamka sanadkan 2019.
“Waxaan taageeraa Dumarka in ka badan intii aan horey u taageeri jiray, maxaa yeelay waxaan dareemayaa in ay mudan yihiin xushmad ka fiican midda haatan ay ka helaan dhaqammadeenna.” ayuu sii raaciyay hadalkiisa Mohamed Salah.
Ciyaaryahan Salah waxaa isaga iyo Sergio Aguero oo Manchester City u dheela ay hoggaanka u hayaan gool dhalinta Horyaalka Premier League ee Ingiriiska iyagoo wada leh min 19 gool, waxaana xalay ay kooxdiisu soo gaartay nus dhammaadka Koobka Champions League, halka sidoo kalena ay hoggaanka u hayaan Horyaalka Ingiriiska oo ay ugu dambeysay hanashadiisa 30 sano ka hor.
SHAXDA ISBUUCA EE UCL: 11-ka xiddig ee ugu bandhigga fiicnaa isbuucan Champions League oo la shaaciyey